တရုတ် Visual electrophysiology တူရိယာ BIO-2000 ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်စက်ရုံ | SDK
၁။ BIO-2000 အမြင်အာရုံ electrophysiological စာမေးပွဲစနစ်သည်သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းများ (ISCEV) နှင့်ကိုက်ညီသည်။ ဤကိရိယာသည် optic အာရုံကြောနှင့်မြင်လွှာ၏အခြေအနေကိုဓမ္မဓိဋ္ဌာန်ကျကျအကဲဖြတ်နိုင်သည်။ ၎င်းကိုလက်တွေ့မျက်စိ၊ မှုခင်းဖော်ထုတ်ခြင်း၊ သင်ကြားခြင်း၊ သိပ္ပံနည်းကျသုတေသနနှင့်ကာကွယ်ဆေးများတွင်အသုံးချနိုင်သည်
2 Pattern visual evoked potential PVEP> Flash visual evoked potential FVEP
ဂရပ်ဖစ်ရုပ်ပုံလွှာကိုဆုတ်ခွာရန်အလားအလာရှိသော G-CVEP> Graphical electroretinogram PERG
Flash electroretinogram FERG> Oscillating potential OPs ဖြစ်သည်
EOG> ပူးတွဲစစ်ဆေးခြင်း PVEP/ERG & FVEP/ERG
ရောင်စုံ flash နှင့်စစ်မှန်သောအရောင်အမျိုးမျိုးသောဂရပ်ဖစ်လှုံ့ဆော်မှုပုံစံများကိုပေးပါ။ ပြီးပြည့်စုံပြီးအစွမ်းထက်သောအချက်အလက်မှတ်တမ်းနှင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစာရင်းအင်းစနစ်။ အစီအစဉ်ထိန်းချုပ်ထားသောစွမ်းဆောင်ရည်မြင့် bioelectric အချက်ပြအသံချဲ့စက်တွင်အနှောင့်အယှက်ပြုနိုင်စွမ်းမရှိ၊ အကာအကွယ်မလိုအပ်ပါ။ Windows တရုတ်စနစ်ပလက်ဖောင်း၊ မောက်စ်နှင့်ကီးဘုတ်လည်ပတ်မှု၊ အပြည့်အဝတရုတ်မီနူးပြသမှု၊ ရိုးရှင်းပြီးအစာရှောင်ခြင်းစစ်ဆင်ရေး;
ထူးခြားသောအသိဥာဏ်အလင်းမီတာစနစ်: ၎င်းသည်ထိုအချိန်တွင်နောက်ခံအလင်းနှင့် flash ပြင်းထန်မှုကိုတိုင်းတာနိုင်ပြီးအသုံးပြုမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောအလင်းအားကိုလျော့ကျစေသည်။ စနစ်တိုင်းတာခြင်း၏တိကျမှုကိုအာမခံသည်။ (ရွေးချယ်နိုင်သော) အလိုအလျောက်နှင့်အလျင်အမြန်ကွေးခြင်း၊ Fourier ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၊ ရောင်စဉ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း - စံတန်ဖိုးများတည်ဆောက်မှုကိုလွယ်ကူစေသည်။
ထောက်လှမ်းမှုတိကျသေချာစေရန်မျက်လုံးအနေအထားစောင့်ကြည့်စနစ် (NEW) ကိုပေးပါ၊ ကြည်လင်ပြတ်သားသောအရောင်အစီရင်ခံစာရွက်သည်လှပ။ အသေးစိတ်စစ်ဆေးမှုရလဒ်များကိုပေးနိုင်ပါသည်
1k2k5k10k20k50k100k200k, program program ဖိုင် ၈ ခုကိုချိန်ညှိနိုင်သည်
Qualcomm သည် 0.1Hz1Hz5Hz30Hz75Hz 100Hz200Hz300Hz 8 ဂီယာချိန်ညှိနိုင်သည်
Low pass သည် 10Hz, 75Hz, 300Hz, 500Hz, 1.5kHz, 2.5kHz, 5kHz, 10kHz, ၈ အဆင့်ညှိနိုင်သည်
ထည့်သွင်းမှု impedance (LNI)
ဒေါ်လာ ၂၀ pV
0.5Hz 1Hz 1.5Hz 2Hz ။ 3Hz အဆင့် ၅ ဆင့်ရနိုင်သည်
အဖြူ၊ အနီ၊ အပြာ၊ အစိမ်းနှင့်အဝါအတွက်ချိန်ညှိနိုင်သောအစီအစဉ်ထိန်းချုပ်မှုငါးမျိုးရှိသည်
0.1H, 0.5H2 1H ။ ၁.၅ tz 2Hz အဆင့် ၅ ဆင့်ချိန်ညှိနိုင်သောထိုင်ခုံအနီရောင်အလင်းတိုင်းတာသံနှင့်အရောင်အချက် ၁၅ ချက်
0.1Hz 0.5Hz 1Hz 1.5Hz 2Hz 3Hz 5Hz ။ THz 10Hz 15Hz ။ 20Hz 30Hz, 40Hz 50Hz, 60Hz, 15 steps ချိန်ညှိနိုင်သည်
အကွက်အကွက်၊ အလျားလိုက်အစင်း hibiscus၊ ဒေါင်လိုက်အစင်းကွက်၊ arc ပန်ကာ
1, 2, 3, 4, 5.6, 7.7 အဆင့်များကိုချိန်ညှိနိုင်သည်
တီဗီ၊ TP၊ BT၊ LT၊ RT၊ တီဘီ။ LR cT, TL TR BL BR ။ ချိန်ညှိနိုင်သောအစီအစဉ် ၁၂ မျိုး
အလိုအလျောက်ကြိမ်နှုန်း predicate impedance စမ်းသပ်; အလိုအလျောက် Yan Xie Liye ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၊ flash ပြင်းထန်မှုကိုအလိုအလျောက်ထောက်လှမ်းခြင်း၊ ဘဏ်၏အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်ရန်အေးမြသောအတွဲ
1, PVEP, 2. FVEP, 3. GVEP,4PERG 5. FERG ။ 6. EOG, 7. OPS, 8. PVEP/ERG ။ ၉။ FVEPERG၊ ၁၀။ G-CVEP
Flash stimulator: 42 20mm (အရှည်) x 500mm (အကျယ်) x 600mm (အမြင့်)
ယခင်: လက်ကိုင်အိတ်ဆောင် non-mydriatic fundus ကင်မရာ FC161
နောက်တစ်ခု: Optical Biometer Colombo IoL Low Optical Version ဖြစ်သည်
Visual Electrophysiology စစ်ဆေးရေးစနစ်
Visual Electrophysiology တူရိယာ
Visual Function Checker ပါ
Ophthalmic AB ultrasonic ရောဂါရှာဖွေရေးကိရိယာ ...